Friday January 06, 2017 - 16:09:58 in Maqaallo by XA_Wararka Caynaba News
Inkasta oo dhawr jeer lagu noqday Wasaaradda Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka oo waraaqaha eeddayda soo gudbisayay, haddana
wax caddayn ah looma helin wanjalka la ii xambaariyay. Sidaas awgeed waxa ay oogista dacwaddaydu dib u dhacday illaa saddex cisho, halkii maxkamadda la iga geyn lahaa Sabtida, waxa la i celiyay maalin Salaasa ah, 30kii Ogos 2016ka.
Garsoore Yaxye ayaa aan ku idhi "Horta yaan u xidhanahay?”. "Waxa sheegi doonta xeer-ilaalinta” ayaa uu yidhi. Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Maroodijeex Axmed Dalmar Ismaaciil oo xafiiskiisa meel ka baxsan dad kula hadlayay ayaa noo soo galay kolkii uu na arkay. Bariido kaddib waxa uu yidhi "Haddii aad galkiisa berri keeni weydaan waa aan sii deynayaa. Soo celiya berri (Arbaca) haddii Eebbe idmo”. "Waa hagaag” ayaa uu dembi-baadhihi yidhi. Maalintaas waxa ay bahda garsoorku ku canaanteen ciidanka booliska in si sharci-darro ah la ii soo xidhay, sidaas awgeedna loo baahan yahay in dhakhso looga gun-gaadho baadhitaanka igu socda. Iyada oo aan waxba soo kordhin ayaa maalintaasna dib la ii qaaday, waxaana la igu celiyay xaruntii ciidanka dembi-baadhista.
Lama yaabin in la i xidho, laakiin waxa dhakafaar igu riday in la garan waayo cidda aan u xidhnahay. Cid kasta oo loo tuhmayayay xadhiggaygu waa ay dafirtay "Wallaahi in aanan waxba ka ogeyn. Aniga iima xidhna. Ma garanayo cidda xidhatay” ayaa lagu kala baydhi waayay. Illaa saddex qof oo siyaabo kala duwan ula kulmay Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyada, waxa uu u sheegay in uu bari ka yahay shirqoolkayga.
Lama tirin karo dadka u tegay maamulaha madaarka ee fara-madhnaanta la soo noqday. Dad uu uga dhaartay xadhiggayga laba jeer ayaa xashka tegay, waxa ay soo noqdeen isaga oo maxkamadda ka leh "aniga ayaa xidhay”. Alleylehe waxa ugu wanaagsanaa Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland oo qiray in uu lahaa amarka la igu xidhay, taasna waxa uu ku sababeeyay inuu codsi uga yimi Wasaaradda Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka Somaliland.
Waxyaabaha niyadda ii ragcay waxa ka mid ahaa baaqyadii ay soo saareen WADDANI, UCID, Xarunta Xuquuqal-insaanka, Ururka qareennada Somaliland, Ururka Saxaafadda ee SECJA, qalinleyla, hal-abuurka, dhallinyarada, qurbe-joogga iyo guud ahaan bulshada Somaliland. "Xadhigga rag ayaa loo sameeyayay. Wax aan magac ahayn kama aad qaadin. Intii aan hore kuu aqoonnin oo dhan ayaa ku bartay. Warkaagu waa ka ugu saamaynta badan ee saxaafadda iyo baraha bulshada lagu hadal hayo. Meel kasta waxa yaalla sawirkaaga oo ummaddii ayaa kuu doodaysa. Mar ay ahaataba waad soo bixi doontaa. Iska samir, ragannimada iyo calool-adaygga ha ka tanaasulin” ayaa ka mid ahaa weedhihii la iigu laab-qaboojin jiray waayadii aan gudaha ku jiray.